3003 DC Aluminum Round Circle / Discs ho an'ny fitaovana fanadiovana sakafo - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Fampidirana fohy momba ny alim-borona 1100:
Ny famokarana aluminium 1100 dia alignement fondée à la famille "kommerciée pure" (1000 na 1xxx). Amin'ny alàlan'ny alim-bary 99.0%, ny aliman-koditra 1000 no be mpamaky indrindra. Izy io ihany koa no fiarovan-danja matanjaka indrindra amin'ny andian-dahatsoratra, ary io no hany lany amin'ny 1000-serivisy ampiasaina amin'ny rivotra. Mandritra izany fotoana izany, dia mitazona ny tombontsoa azo avy amin'ny fihoaran-tsarimihetsika (raha oharina amin'ny andiam-panohanana hafa), toy ny fitarihana herinaratra, ny fitondran-tenan'ny toetr'andro, ny fanamafisana ny fahasalamana, ary ny fahaiza-miasa. Mety hiantehitra amin'ny asa mangatsiaka izy, fa tsy amin'ny fitsaboana hafanana.
Ny alimina / Aluminium 1100-tanana dia manana fahaiza-manao tsara indrindra, indrindra rehefa milamina ny fomba fitafy. Ny fitaovana karbaona dia mety, fa ny fitaovana haingam-pandeha haingam-pandeha ihany koa dia azo ampiasaina. Raha toa ka ilaina ny fatiantoka mavesatra dia tsy maintsy ampiasaina ny menaka solika.
Ny mofomamy mafana sy mangatsiaka dia mora atao amin'ny Aluminum / Aluminum 1100 legotra. Mety ho mangatsiaka ny alàlan'ny ala amin'ny alàlan'ny fehezan-koditra tsy misy ilàna azy.
Ny fampitaovana dia azo atao mora foana amin'ny fampiasana ny fomba mahazatra. Azo ampiasaina ny AL 1100 electrodes ary ny filaharan'ny filler amin'ny dingana.
Aluminium / Aluminium 1100-alignement dia tsy afaka ny hafanana hafanana hafa noho ny hamoahana ny endrika nopetahana sy ny 'O' fanahy.
Aluminium / aluminium aluminium 1100 dia azo hafanana tsy misy olana be.
Ny asa mahomby dia azo atao mora foana amin'ny Aluminum / Aluminum 1100 legierungen.
Aluminium / Aluminium 1100 legge dia tsara indrindra ho an'ny hatsiaka miasa satria manana ny dktilitety tsara ao amin'ny toe-javatra mihalefy. Mety ho mangatsiaka koa izy io amin'ny alalan'ny fanondonana, na manodina na miolakolaka.
Rehefa vita ny hatsiaka amin'ny Aluminium / Aluminum 1100, dia ilaina ny fanasitranana ary azo tanterahina amin'ny 343 ° C (650 ° F) ho an'ny fotoana mety tsara mba hahazoana antoka ny fiterahana ary avy eo afaka hafanana rivotra.
Aluminium / Aluminium 1100 legge dia mety ho mafy fo noho ny hatsiaka miasa.
Aluminium / Aluminium 1100 legale dia ampiasaina betsaka amin'ny kitapom-bolongana, fantson-damba hafanana, kofehy hollowware, dials sy ny anaran'ny takelaka, ny endriny dekoratif, fanomezana kafe, fitaovam-pihinanana, rivets ary reflector, ary amin'ny asa vita amin'ny ratra.
Ny indostrian'ny alim-bary dia namorona rafitra iray izay mampiasa karazana tarehimarika efatra heny mba hamantarana ireo fitokonan'ny aluminium. Ny tarehimarika voalohany dia manondro ny singa lehiben'ny fanodinana. Ny tarehimarika faharoa dia manondro raha nisy ny fanovana teo amin'ny aleha fototra. Ny isa fahatelo sy fahefatra dia manondro ny fiarovan-tena manokana. Ireto manaraka ireto dia maneho ireo vondrona samihafa:
1XXX Aluminium 99% na mihoatra
2XXX Kôlôpeo - loharano lehibe manodina
3XXX Manganese - singa lehibe manodina
5XXX Magnesium - singa lehibe manodina
6XXX Magnesium sy silicone - singa fototra fanodinana
7XXX Zinc-major singulier antique
* Mihoatra ny 20 taona no niaina tamin'ny saha Aluminium Circle.
* Torohevitra manokana momba ny metaly haino aman-jery sy tolotra malefaka.
* Fahalalàna ambony, fahalalana lalina momba ny vokatra.
* Ny vidin'ny fifaninanana, ny kalitao ambony, ny traikefa manankarena ary ny laza malaza
* Natao tsindraindray.
* Good service after-sale.
* Fantatra sy azo itokisana amin'ny mpanjifa.